Tufaax duban oo leh kareemo yogurt iyo lowska | Cunnooyinka jikada
Tufaax duban oo leh kareemo yogurt iyo lowska
Maria vazquez | | Postres, Cunnooyinka miraha leh
Fall marwalba waxaa lala xiriiriyaa guriga diyaarinta tufaax duban. Waxaan xasuustaa hooyaday oo usbuuc walba dubaysa saxaarad inkasta oo aanan u badin taas in badan, hadana waligay ma rabin inaan ka tago dhaqanka. Kaliya maahan sababta oo ah waxaan jeclahay tufaax la dubay laakiin sababta oo ah urta ay bixiyaan marka ay dubista yihiin lama diidana.
Tufaax duban ayaa aad u fudud in la diyaariyo; Shaqada inteeda badan waxaa lagu sameeyaa foornada. Foorno sidoo kale kululeysa jikada; wax lagu mahadiyo guryo qabow sida tayda oo kale. Waxaa jira kun siyaabood oo iyaga loo sameeyo iyo kun siyaabood oo loo cuno sida xaaladdan oo kale kareemo yogurt iyo lowska.
Marka tufaaxa la sameeyo, cunitaankooda diirran waa raaxada ugu weyn. Iyaga oo ku rusheeyey in yar oo qorfe ah waxay horey u leeyihiin dhadhan aan caadi aheyn laakiin haddii, marka lagu daro, waxaan ku buuxinaynaa caano fadhi iyo kareem miro qalalan natiijadu waa ... Waa inaad isku daydaa Markaad daarto foornada, diyaarso ugu yaraan lix tufaax, waad cuni doontaa!
Tufaax la dubay oo leh kareemo yogurt iyo lowska
Tufaaxa la dubay oo leh yogurt iyo kareem miro qalalan oo aan soo jeedinayo maanta waa macaan weyn oo diiran bilaha deyrta.
1 yogurt creamy
2 qaado oo looska la jarjarey ah
Si aad u qurxiso: malab iyo qorfe
Waxaan dhaqnaa tufaaxa iyo mindi yar ayaan ka saareynaa qaybta sare, tan dabada, abuurista dalool yar.
Waxaan ku dhejinaynaa weel wax lagu dubo, waxaan buuxinaa meelaha banaan malab qulqulaya oo qorfe ku rusheeyaa.
Waxaan ku shubnaa biyaha isha, qiyaastii hal sentimitir, iyo waxaan gelinay foornada ilaa 40 daqiiqo 200 at. Waxay diyaar noqon doonaan marka maqaarku duuduubmo oo furmo. Waqtigu wuxuu ku xirnaan doonaa xajmiga iyo nooca tufaaxa oo haddii aadan weligaa diyaarin waxaad mar walba hubin kartaa inay jilicsan yihiin adigoo ku garaacaya mindi yar, marka aad aragto calaamadahaas,
Waxaan damineynaa foornada iyo waxaan u oggolaanay inay xanaaq badan yihiin gudaha oo albaabku xoogaa u furan yahay.
Halka, waxaan diyaarinnaa wehelka isagoo liinta yogurt kula nuts ah koob.
Waxaan soo ururinaynaa macmacaanka ku darida dalool kasta oo tufaax kasta ah yogurt iyo kareemka lowska ilaa ay ka daadanayso.
Si loo dhammeeyo, waxaan ku darnaa buufin malab ah oo aan ku dhammeyno rusheeyey qorfe.
Waxaan ugu adeegnaa tufaaxyada la dubay kareemo caano fadhi iyo miro la qalajiyey.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Postres » Tufaax duban oo leh kareemo yogurt iyo lowska
Digir cad oo diirran, baradho iyo karootada